6 Zvikonzero Zvakakodzera Kutenga B2B kana B2C Prospect Chinyorwa | Martech Zone
Wednesday, May 21, 2014 Chishanu, July 8, 2016 Douglas Karr
Iwe unonzwa here kuchema? Wow .. Jenn Lisak akaita paakatumira paTwitter yenzvimbo dzeku tenga mabhizinesi akarongeka. Kuungudza kwekusafara kwakakurumidza uye agency yedu yakatonzi haina hunhu nemunhu mumwe. MaTweets acho ainyadzisa zvekuti Jenn akabvisa iyo Tweet ndokumisa hurukuro.
Jenn paakandiudza maitiro, ndakashatirwa chaizvo. Kutanga, kusanzwisisika kwemumwe munhu papuratifomu iyo inotengesa uye inotengesa data rayo pachena zvinosemesa. Chechipiri, iko kuita kwainge kwaitwa naJenn kwaisanzwisisika. Zvisinei nenyasha dzaJenn, kuzvininipisa uye hunyanzvi… vanhu vakamutevera vakabva vatanga kufunga kuti zvinyorwa zvacho zvaizoshandiswa mukuipa.
Iko kufungidzira kwaive kuti izvi zvinyorwa zvaive zveSAMP kuburitsa kwevanhu. Hongu… mushambadzi ane ruzivo nesangano rinoona nezvekurukurirano yeemail, vanobatsirana pane email kushambadza chikuva, uye ine hukama hwakakosha ne kuendesa chikuva… Neimwe nzira yaizofunga kuti ipfungwa yakanaka kutanga spamming mabhizinesi.
Pandaive mune yakananga indasitiri yetsamba, isu takatenga zvinyorwa zvisina kumira. Heck, imwe yemaitiro anoshamisa akaitwa nemushandirapamwe waVaObama yaive yekutenga mamirioni ezvinyorwa zvemunhu kuti avandudze zvirongwa zvekusvitsa munharaunda kwavakanzwisisa… zvichimutungamira kurova Hillary Clinton (aive muridzi weDemocratic database) ndokutungamira pamberi sarudzo.
Kutenga data kunofanirwa kuve mari kune ese bhizinesi! Kune SPAM? Zvakapesana chaizvo!
Kushandisa data rebhizinesi kunoita kuti vashambadzi vaite toni yemakampeni akanangwa zvikuru anovabatsira kudzivirira SPAM zvachose!
Kuisa Dhata kune aripo mazita evatengi anogona kubatsira kukupa iwe kusvika parizvino ruzivo rwebhizinesi, chikamu chikamu data, ruzivo rwekuonana, uye rumwe ruzivo rwakakosha. Ruzivo irworwo runogona kukubatsira iwe kukudziridza dzakanyanya kutarisirwa mushandirapamwe nekunongedza kwakaringana.
Kuchenesa Dhata inogona kukuchengetedza kubva pamablacklist, kuwedzera yako inbox kuiswa, kukubatsira iwe kudzivisa zvisina kuchena mafirita, uye kunatsiridza kwese kuendesa. Dhata inokwegura - kunyanya email email kero uko kune yakakwira mari. Kutenga zvinyorwa zvakagadziridzwa kana kuchenesa zvinyorwa zvako zvazvino inogona kutyaira kuvandudzwa kukuru pachena, tinya-kuburikidza nemitengo, uye shanduko kune yako email kushambadzira.
Kutsvaga Vatengi iyo yakaenderera mberi inogona kubatsira kuwedzera bhizinesi rako. Kana ini ndikashanda necontact pane imwe kambani uye isu takabudirira, kutsvaga kwaakatamira uye kuunza zvakare zvigadzirwa zvako nemasevhisi zvinogona kubatsira kuvadzosa! Nepo kuchengetwa iri iro rakanakisa mutemo, kushambadzira vatengi avo vakaenderera kumberi kunoshanda zvakare!
Profile Analysis - kuongororwa kwevatengi uye kuunganidzwa kwedata kwakanaka, asi data append inogona kukupa iwe ruzivo rwese bhizinesi rako rinoda kubatsira kubatsira kunzwisisa avo vanhu kana mabhizinesi auri kutoita nawo bhizinesi. Huwandu hwevanhu uye firmographics inogona kukubatsira kuti unzwisise maindasitiri uye jogirafi iwe yauri kusvika (kana kwete), kukubatsira iwe kuvandudza zvakanangwa zvemukati marongero, uye kukubatsira iwe kuona kwakaringana nzira dzekushambadzira kuti uwane iwo meseji chaiyo kumunhu chaiye.
Bhizinesi Nyowani - unonzwisisa here kupinda kwako mumusika? Pane mabhizinesi matsva kunze uko kana tarisiro nyowani kunze uko iwe yaunofanirwa kushambadzira kwairi? Nyowani mabhizinesi zvinyorwa ndeyangu mugodhi wegoridhe kumaindasitiri mazhinji! Kwete yeSAMPING, asi yekutsvaga uye kuvaka hukama navo. Kana iwe uri agency inopa yekumaka uye dhizaini masevhisi, ndiani zvirinani kushambadzira kune pane runyorwa rwemabhizinesi achangoshandisa uye akagamuchira avo marezinesi ebhizinesi. Ndezvipi zvimwe zvaungavawana vasina dhata?
Prospect Lists - uri bhizinesi rakangowana rakaurayiwa mari yekudyara? Inguva yekuti iwe utange kushingairira kutsvaga tarisiro uye kuitengesa. Iwe haugone kumirira pamvumo-yakavakirwa mukati mekutengesa kwekuedza kuti ubate uye vanhu vagogogodza pamusuwo wako… iwe ucharasikirwa nevashambadzi nemukana wako. Prospect zvinyorwa zvinogona kubatsira yako yekutengesa timu kunanga kunongedza mafoni avanogadzira uye tsamba iyo yako department rekushambadzira inogona kubata nayo. Iko hakuna nzira yekuita izvi pasina kutenga dhata.
Wakambotenga yakanangwa dhata kune rako bhizinesi? Ini ndashanda toni yemabhizinesi, ndakashanda mudhatabhesi uye nekushambadzira kwakananga, uye ikozvino online. Isu tinonyatso ziva kuti mvumo-yakavakirwa, inbound kushambadzira kuedza kunoitisa zvisingaite bhizinesi mhedzisiro kumabhizinesi Asi isu hatisi vasingazivi nezvekuti iro rakatengwa dhata rinogona kubatsira zvakare kuongorora, kuongorora, kugadzirisa uye tarisa zvirinani kutengesa nekutengesa kushambadzira. Pane kudzoka kukuru pane data rakatengwa!
Inofambiswa nemubatsiri wedu, Usamborega.
Tags: tenga datatenga zvinyorwadata wedzerakuchenesa dataemail zvinyorwakumwebhizinesi idzvakuongorora kweprofiletarisiro zvinyorwa
Kukadzi 13, 2015 na12: 07 PM
Chinyorwa chikuru Douglas, ndanga ndichitsvaga ruzivo maererano neB2B kana B2C tarisiro zvinyorwa kwenguva yakareba ikozvino, izvi zvakabatsira zvakanyanya kutenda, ndichave ndichigovana izvi nechikwata changu.
May 16, 2016 pa 3: 45 PM
Ida iyi posvo Douglas!
Kutenga email zvinyorwa zvinowana rap yakaipa zvakadaro asi inogona kuve nzira huru yekusvitsa yakawanda yeako vateereri vateereri apo inbound kushambadzira kwekuedza kuwana traction Ini pachangu ndinoshandira kambani inonzi Clickback iyo inoshanda zvakanyanya nemakambani eB2B uye kwavo kwekushambadzira kwekushambadzira.
Zvirokwazvo chinyorwa chandinenge ndichigovana!
May 16, 2016 pa 10: 05 PM